သုံးနေရင်း Hi-So App ကို ဆက်သုံးလို့ မရတော့ရင်
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုကို မိမိတယ်လီဖုန်း ဆက်တင်ထဲက တစ်ဆင့် ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ App က Wi-Fi သို့ မဟုတ် တယ်လီဖုန်း ဒေတာ နဲ့ ချိတ်ဆက်နေမှ အသုံးပြုလို့ ရမှာပါ။ Hi-So App ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို Google Play Store သို့ Apple App Store ထဲက ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားလား စစ်ပေးပါ။
ကိုယ်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ဘိုကင်မှတ်တမ်းကို ဘယ်လိုဖျက်လို့ ရမလဲ။
သင့်လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Delivery တိုင်းကို "ကျွန်ုပ်၏Deliveryများ"ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘိုကင်မှတ်တမ်းကိုတော့ အခုလောလောဆယ်ဖျက်လို့ မရသေးပါ။
အိမ်မွှေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုရော ပို့ ပေးလား။
တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု မရှိသေးပါဘူး။
Hi-So Driver တွေက အိမ်ထဲထိ ပစ္စည်းလိုက်ချပေးမှာလား
Hi-So Driver တွေဟာ သူတစ်ပါး အိမ်ပိုင်နက်(သို့ ) ရုံးတွင်းသို့ ဝင်ဖို့ ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ပစ္စည်းကို တံခါးဝမှာ လက်ခံပေးပါ။
Hi-So Driver ကAppထဲမှာ ပြထားတဲ့ ဈေးထက် ပိုက်ဆံပိုတောင်းတယ်
Delivery အတွက် ကျသင့်ငွေအတိအကျဟာ Hi-so အသုံးပြု သူ ကခရီးစဉ်ကိုစပြီး requestကတည်းက ဖော်ပြပြီးသားပါ။ Hi-So Driver တွေဟာ App ထဲမှာ ပြထားတဲ့ ဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီး တောင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ သို့ သော်လည်းချွင်းချက်အနေနဲ့လမ်း၊တံတား၊ဂိတ်ကြေး၊ သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့ အလေးချိန်အပိုကီလိုဂရမ်၊ ပစ္စည်းရဲ့ (အပို)ပမာဏအတွက်ကောက်ခံခြင်း အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ကျသင့်ငွေထက်ပိုမို တောင်းခံရခြင်းရှိတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို “Terms and Conditions”တွင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဘိုကင်ကတော့ လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းပို့ ရမယ့် နေရာက လမ်းတစ်ဝက်မှာဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ။
ပစ္စည်းပို့ ရမယ့် နေရာက လမ်းတစ်ဝက် (သို့ ) သင့် ရွေးချယ်ထားခဲ့တဲ့ နေရာလောက် မဝေးဘူးဆိုရင်တောင် App ထဲမှာ ပြထားတဲ့ မူလ Delivery ပို့ ဆောင်ခ အပြည့်အ၀ကို ပဲ Hi-So User က ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Delivery Service ကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါ၊
ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောပို့ဆောင်မှုများကိုပြန်ကြည့်လိုပါက “Your Deliveries”တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။သင် ဒါမှမဟုတ် Hi So Driver များကခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်လိုက်ပါက Status နေရာတွင် Cancelled ဟုပေါ်နေပါလိမ့်မည်။. Delivery ခကိုသင့်ဆီမှ ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။. သင်မပြုလုပ်ခဲ့သောခရီးစဉ်တစ်ခုမှ Finished ပြနေလျှင် Hi-So Customer Service (09894991061) သို့ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရမလဲ။
App ထဲကို ၀င်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ "လိုင်းသုံးလိုင်း" ရှိတဲ့ ခလုပ်လေးကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် "မိမိပရိုဖိုင်း"ဆိုတဲ့ စာသားကို တွေ့ ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စာသားကို နှိပ်လိုက်ပြီးရင် ညာဘက် ထောင့် က "အစက်သုံးစက်" ပါတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်မည်ဆိုပါက "ပရိုဖိုင်းကိုပြင်မည်" ဆိုတဲ့ စာသားကိုနှိပ်လိုက်ပါက မိမိနာမည်၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဘာသာစကားနှင့် ငွေကြေးစနစ် အစရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှို့ ဝှက် နံပါတ် ပြောင်းချင်ပါက "စကားဝှက်ပြောင်းမည်" ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
အီးမေးလ် ကို Verify ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Hi-So အက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ လော့အင်လုပ်ပြီး စက်ဘီးနှင့်ပို့ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်ပို့မည့်/ရယူမည့် နေရာကိုရိုက်ထည့်ပြီး ပေးပို့ရန်တောင်းခံမှုပြုလုပ်ပါ။. Hi-So driver များကသင့်လိုချင်သောနေရာသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။